Sports Illustrated မဂ္ဂဇင်း၏ ရေကူးဝတ်စုံအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသော အလန်းဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး | Buzzy
မဂ္ဂဇင်းကို မှာယူသူဟာ သုံးသန်းကျော်ရှိပြီး အပတ်စဉ်ဖတ်ရှုသူပေါင်း ၂၃ သန်းထိ ရှိကာ ၁၈ သန်းကျော်ကတော့ အမျိုးသားပရိသတ်ပါ ။ ဒီထဲကမှာ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံ ဖော်ပြမှုကို ၁၉၆၄ ကစတင်ခဲ့ပြီး ယနေ့ထိ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုသူများပြားလှပါတယ် ။
မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံရခြင်း မရှိခင်က Tyra Banks ဟာ အောင်မြင်တဲ့ Talk Show တွေ တင်ဆက်သူပါ ၊ သူမဟာ မော်ဒယ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ အဓိကဝင်ငွေရရှိသူပါ ။ သူမဟာ Sports Illustrated Swimsuit Edition ရဲ. ပထမဆုံးသော အာဖရိကန်-အမေရိကန် မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ် ။
Hannah Davis ဟာ ကမ္ဘာအလန်းဆုံး နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမက Sports Illustrated ရဲ. ရေကူးဝတ်စုံအစီအစဉ်မှာ ဖော်ပြခံရတဲ့ မျက်နှာသစ် မော်ဒယ်တစ်ဦးပါ ။ သူမဟာ Derek Jeter ရဲ. ရည်စားလည်း ဖြစ်သလို Sports Illustrated Swimsuit Issue မှာ ယခုနှစ် ၂၀၁၅ တုန်းကမှ ပါရှိလာသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
Miller ဟာ အသက် ၃၀ ခန့်ရှိပြီး မဂ္ဂဇင်းရဲ. ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် ရေကူးဝတ်စုံ အစီအစဉ်မှာ ဖော်ပြခံရတဲ့ မိန်းမလှတစ်ဦးပါ ။
ငယ်ရွယ်ပြီး တက်ကြွမှုရှိတဲ့ Kate Upton ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မျက်လုံးပြာ အသားဖြူဖျော့ဖျော့နဲ့ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။
Irina Shayk ဟာ ရုရှားမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေးတွင်း အလုပ်သမားဖခင် နဲ့ ကြင်နာတက်တဲ့ ကျောင်းဆရာမမိခင် တို့ကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ ။ သူမဟာ လုပ်ကိုင်သမျှတိုင်းကို ထူးဆန်းတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြောင့် အောင်နိုင်လေ့ရှိပြီး မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံရတာကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ပါ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ် The Rock in Hercules မှာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ။